Amniga Muqdisho oo si weyn loo adkeeyay iyo wufuud IGAD kasocota oo soo gaareysa – Radio Muqdisho
Inkastoo dhawaanahaanba Ciidamada amaanka Soomaaliya ay adkeeyeeen amaanka caasimadda iyo Gobollada dalka isla markaana howlgallo is daba joog ah oo lagu baacsanayo nabad diidka ay ka socdeen Magaalooyin dhowr ah oo caasimaddu ka mid tahay Hadana 48 dii saac ee la soo dhaafay waxaa la kordhiyay howlaha amniga la sugayo iyadoo ciidamo dheeeraad ah la soo dhigay wadooyinka caasimadda.
Wadooyinka magaalada Muqdisho inta badan waxaa lagu arkayay ciidanka Booliska oo aad u Feejigan isla markaana Xaqiijinaya amaanka iyadoo Ciidanku ay baarayaan Gaadiidka Dadweynaha iyo dadka socda wadada hareeraheeda .
Qaar ka mid isgoysyada caasimadda oo aanu kula kulanay ciidanka iyagoo howlaha amaan sugida ku jira waxaa ay saraakiisha Booliska ah Ee hormuudka u ah ciidanka amaanka goobahaas Sugayay noo sheegeen in la sii wadi doono Howlahaan inta Maleeshiyaadka nabad diidka ah laga sifeynayo dalka si aanay u geysan falal dadka shacabka ah lagu gumaado.
Col. Maxamed Daahir Cabdulle Taliyaha saldhiga Booliska degmada Hodan ayaa ka mid ahaa saraakiisha aan la kulanay ee amniga sida weyn u sugayay isagoo xusay in howshu soconeyso habeen iyo maalinba si looga hortago araggaxisada.
Goobaha qaar ciidamada AMISOM ayaa lagu arkayay iyagoo Sugida amniga qayb ka ah, gaadiidka shacabka ayaa ah kuwo laga celinayo wadada Maka al Mukarama ee Madaxtooyada hormarta iyadoo dadweynaha iyo gaadiidka loo fasaxay wadooyinka kale si ay u isticmaalaan.
Afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliyeed G/Dhexe Qaasim Axmed Rooble. ayaa warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed waxaa uu faah faahin ka siiyay Howlgaladaan lagu adkeynayo amaanka caasimada ee ciidamada amnigu ay wadaan waxaana uu tilmaamay in lagu qabtay maalmihii ay socdeen hub iyo dad la tuhmayo.
Adkeynta amniga magaalada Muqdisho in kastoo mar walba ay ciidamadu u taagan yihiin hadda waxaa uu ku soo beegmayaa iyadoo saacadaha soo socda fufuud caalami ah ay ku soo fool leeyihiin waxaana ka furmaya shirka urur goboleedka IGAD oo Somalia ay Marti gelineyso mudo 29 sano ah ka dib.
Magaalada Muqdisho waxa ay horay u marti gelisay shirkii Golaha amaanka QM oo soo booqday Waxaana Muuqata in Somalia Muuqaalkii horay looga heystay ay wax badan iska bedeleen.